ओलम्पिक मुभमेन्ट आफैमा स्वायत्त छ ः जिवनराम श्रेष्ठ « KhelkudNews.com
Published On : 19 July, 2018 3:19 pm
जिवनराम श्रेष्ठ, नेपाल ओलम्पिक कमिटी तथा ओलम्पिक काउन्सील अफ साउथ एसियाका अध्यक्ष । श्रेष्ठसंग नेपाल ओलम्पिक मुभमेन्टका बारे खेलकुद न्युज डटकमले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप
नेपालमा ओलम्पिक मुभमेन्ट पछिल्लो समय कसरी अघि बढीरहेको छ ?
सन् १९६३ मा नेपालले अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको सदस्यता लिएको हो । यस पछिका दिनमा विभिन्न ढंगबाट नेपालमा ओलम्पिक मुभमेन्ट अघि बढीरहेको छ । पछिल्लो समय ब्यापक र प्रभावकारी ढंगबाट नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आफ्ना गतीबीधी गर्दै आएको छ । ओलम्पिक स्पीरीटलाई नेपालको खेल क्षेत्रमा संलग्न सबैले स्वीकार्दै आएका छौ । यस मुभभेन्टबाट नेपालीहरुले पनि लाभ लिदै आइरहेको समयमा यसको प्रभावकारीता अझ बढ्दो छ । पछिले समय नेपालमा ओलम्पिक मुभमेन्टको विषेशता भनेको यसको ब्यपकता र धेरै जना लाभान्वीत हुनु हो ।
ओलम्पिक मुभमेन्टमा थर्ड पार्टी इन्टरफेरयन्स मानीदैन । तर, नेपालमा त विभिन्न ढंगका हस्तक्षेप हुदै आए नी ।
आोलम्पिक मुभमेन्ट आफैमा स्वायत्त छ । आइओसीले निर्धारित गरेको निती र उद्धेश्य अनुरुप नै यो चल्ने हो । यसका उद्धेश्य र लक्ष्य माथि आघात पुग्ने गरी हस्तक्षेप हुुनु हुदैन भन्ने हो । नेपालमा पनि ओलम्पिक मुभमेन्ट स्वायत्त ढंगले चलेको समयमा विभिन्न खाले हस्तक्षेपका घटना भएका छन् । त्यसता खाले घटनाले निसन्देह ओलम्पिक मुभमेन्टलाई असर गर्छ नै । त्यसता खालका घटना अब हुदैन भन्नेमा हामी बिश्वस्त छौ ।
तपाई दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सीलको अध्यक्ष हुनु हुन्छ । जनसंख्याको हिसाबमा हेर्दा यो क्षेत्र नै खेलकुदमा अत्यन्त कमजोर रहेकाले आलोचना भएका छन् नी ?
खेलकुदको विकास भनेको त्यहाँको जनसंख्याको साथै अर्थतन्त्रमा पनि निर्भर रहने गर्छ । त्यहाँका देशहरु कसरी चलेका छन् भन्नेले पनि असर गर्छ । जहाँसम्म जनसंख्याको तुलनामा खेलकुदमा कमजोर रहेको कुरा छ, त्यो समस्या दक्षिण एसियाको मात्र होइन ,सिंगो एसियाको हो । केही देशलाई छाड्ने हो भने एसियाले जनसंख्याको जत्ति मात्रा ओगट्छ त्यसको तुलनामा खेलकुदको स्तर कमजोर छ ।
यहाँको अर्थतन्त्र र खेलकुदमा दिइएको प्राथमिकताको कारण पनि यसो भएको हो । दक्षिण एसिया अहुआयामिक ब्यक्तित्व भएको क्षेत्र हो । यहाँ खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखिएमा र ब्यबस्थित गरिएमा राम्रो विकास हुन सक्छ । यहाँ रहेका समुदाय आफूलाई अब्बल सावित गर्न पनि सक्छन् ।
नेपालले सन् २०१९ मा १३ औ दक्षिण एसियाली खेलको आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तयारी त देखिदैन नी ?
सन् २०१९ को मार्च ९ देखि १८ मा १३ औ दक्षिण एसियाली खेलकुदको आयोजना नेपालले गर्ने निर्णय यथाबत छ । हामी तम्तयार छौ । यसका लागि सबैभन्दा आबस्यक भनेको भौतीक पूर्वाधार नै हो । भुकम्पले क्षती पु¥याएको संरचनाका साथै केही नया संरचनाको तयारीको काम भइरहेको छ । तयारीका सबै पाटोको सरकारमा रिपोर्टिङ भइरहेको छ । हामी निर्धाति समयमा आयोजन ागर्ने तयारीमा अघि बढीरहेका छौ ।
कल्पनालाई ओलम्पिक वाइल्ड कार्ड प्राप्त
जापानमा हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि नेपालकी सुटिङ खेलाडी कल्पना परियारले शुक्रवार वाइल्ड कार्ड प्राप्त गरेका
रेगनलाई चक्र लामा÷कसिन लामा स्मृति स्नुकर उपाधि
अजिमा स्नुकर हाउसका रेगन श्रेष्ठ अंकितमान श्रेष्ठले प्रथम चक्र लामा÷कसिन लामा स्मृति राष्ट्रव्यापी खुला स्नुकर